Usayizi 16.21 MB
Play 13 983
Zadalwa 09-09-2010 21: 50: 29
Kushintshwe 01-12-2012 22: 22: 27
Umbhali: Samdim Design http://samdimdesign.free.fr/
Model okuningiliziwe kanye complet, yinto enhle kakhulu add-on! F-BXHV aeroclub Cap Evolution, LFPT Pontoise-Cormeilles, France Mudry CAP 10 is a isihlalo ezimbili-ukuqeqeshwa ndiza yasemoyeni wakha okokuqala ngo 1970 namanje zokukhiqiza 2010. Le ndiza yasungulwa kusukela Piel Super Emeraude futhi wazalwa njengoba CP100. Igama washintsha ukuze CAP 10, CAP ngoba 'ezakhiwe Aéronautiques Parisiennes'.
Cap 10 wawenziwe by Mudry (igama umklami yayo) e Bernay, eFrance, wathengwa CAP Industries ngalo, waba Apex Aircraft. Ukulandela ucabanga of Apex e 2008, amalungelo ukuze kukhiqizwe Spares ayenikwe Dyn'Aviation.
Mudry CAP-10 for FSX Thwebula
Incazelo 5 436
Incazelo 8 753
Incazelo 11 553
Incazelo 11 956
Incazelo 12 997
Incazelo 10 567
Incazelo 19 038
Incazelo 6 101